AddThis Waxay Ku Darsaneysaa Beegsiga Shakhsiyeed Si Loogu Hormariyo Ka Qaybqaadashada, Is-Beddelka Iyo Dakhliga | Martech Zone
Inta badan adduunka tiknoolajiyada suuqgeynta ayaa diiradda saaraya booqashooyinka. Xiriirinta baayinka ayaa ka baxsan jaantusyada waxayna keeneysaa natiijooyin xun oo loogu talagalay suuqleyda. U helida qof goobtaada runti waa fududahay, laakiin ku haynta halkaas oo runtii ku dhiirigalinaysa inay ganacsi kula yeeshaan waa arrin aad u adag. Xitaa daabacaadda sida kuweenna oo kale, kordhinta daawadayaasheenna waa muhiim - laakiin ilaa ay dadku la falgalaan noocyada aan ka hadlayno, wax waluba waa wax aan jirin.
Waa inaan la xiriirnaa dhagaystayaasha xiiseynaya mawduucyadeena - mar alla markii aan ugu dambeyntiina gaadhno degelkeenna, waa inaan si adag u shaqeynaa si aan ugu sii haysano goobta ama u siino habab ay uga sii hawl galaan. Shakhsi ahaan waxaan ku sameynaa taas bixinta deeqaha rukunka iyo talooyinka boostada ee la xiriira heer ballaaran.
AddThis ayaa adeegsaneysa awooda balaayiin isticmaale oo la gaarsiiyay si ay u siiso waxyaabo shakhsi ahaaneed bartilmaameed ah si ay martidaadu ugu mashquulsan yihiin bartaada. Waxaa loogu talagalay inay ka caawiso milkiilayaasha bogagga inay kordhiyaan waqtiga isticmaalehu ku qaato boggooda iyagoo muujinaya waxyaabaha iyo dalabyada ku habboon shaqsiyaadka dantooda gaarka ah leh.
Marka websaydhkaagu leeyahay booqde markii ugu horreysay, ma garanaysid waxa booqdehu jecel yahay ama uu gujin doono. Laakiin AddThis waxay hore u ogtahay danaha isticmaalaha iyo dookhyada iyadoo lagu saleynayo hawlgalkoodii hore ee bogagga kale ee AddThis. Hadda bartaadu waxay bartilmaameed ka dhigan kartaa waxyaabaha, alaabada ama wax soo saarka iyada oo ku saleysan taariikhdii hore ee isticmaalaha.
Waad ku dejin kartaa bartilmaameedka si fudud gudaha AddThis:
Oo waxaad ku cabbiri kartaa beddelaad si fudud adoo adeegsanaya badhanka AddThis:
Waxqabadkaani wuxuu horey u heli jiray oo kaliya xayeysiistayaasha iyo daabacayaasha dhamaadka sare. AddThis waxay ku daraysaa $ 12 / bishii iyada oo qayb ka ah rukunka AddThis Pro, taas oo ka dhigaysa mid aad u jaban.
Tags: additistalooyinka tusmada addthistalooyinka nuxurkabeegsiga waxyaabahahagaajinta heerka beddelkahagaajinta hawlgelintahagaajinta dakhligakordhiya sheekooyinkakordhin hawlgelintakordhinta dakhligahayso martidaka kooban shakhsihayn martida